ဖူးနုသစ်: ဝမ်းမြောက်စရာ သတင်းကောင်းများ
Posted by ZT at 2:10 AM
ZTနဲ့ ပပဝင်းခင်နဲ့ ယူတော့မယ်တဲ့။ ဒါလည်းသတင်းကောင်းပဲ။
တစ်ချီု့ကလည်း ဆက်စောင့်နေကြတယ။် မျော်လင့်နေကြတုံးဘဲ။
မဟုတ်မှန်းသိပေမယ့် ဖတ်ရင်း ဟုတ်သလိုလိုထင်လာသေးတယ်
တကယ်လားလို့။ ဟွန်း၊ ပြီးမှပဲ သိတယ်။ ဟင့် ဟင့်။
အဟုတ်မှတ်နေတာ၊ ဘယ်သူပြောသွားတာလဲဆိုပြီး သဘောတွေကျကာမှ။
totally made me feel uneasy at the end of the post...!
အခွန်ကိစ္စတခုလောက်ပြင်တာဆိုရင်တော့ ယုံရကောင်းသား။ အခုတော့ သတင်းတွေက ကောင်းလွန်းအားကြီးလို့ ဒုတိယ ကားပါမစ်ချပေးတာကစလို့ မယုံတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ အေပရယ်ဖူးလ်လုပ်တယ်ပေါ့လေ။
ရက်စက်တယ် ရက်စက်တယ် တကယ်ယုံမိလို့ ဧပြီဖူးလုပ်တယ်ပေါ့
တယ်ဟုတ်ပါလားပေါ့ .. း( ခုတော့ .. သူများတွေကို ဖူးဖြစ်အောင် သွားလုပ်ဦးမယ် .. :P
WHo is ZT..?
ဟယ်တော့... ရက်စက်တယ် ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ တကယ်မှတ်လို့ပျော်နေတာ ။ ပျော်နေရင်းနဲ့ စိ်တ်ကူးတွေတောင် တသီတတန်းံကြီးဖြစ်သွားလိုက်သေး ။ အဆုံးကျတော့မှ...... ဟင်းးးးးးး
April Fool လုပ်ပါတယ် ဆိုမှ Sure လားဆိုတော့ ဘယ်လို ဖြေရမှာလဲ။ ဟီးဟီး။ :P
အကောင်းမှတ်လို့ ဖတ်။ ဆုံးတော့မှ တုံးမှန်း သိတော့တယ်။
ZT...full lote chin yin,, ta char way nae full lote par,, ku tau,,, lu tie yae mhyaw lint check tway ko full lote tel,,
Zt ,, lu soe pel,,lu soeeeeeeeeee
April fool လုပ်တော့မယ်ဆိုတာ သိလို့ ဖတ်ကို မဖတ်ဘူး သိလား။ ကွန်မန့်ပဲ ဝင်ရေးသွားတာ.. :D
April Fools ဆိုတာ မေ့ပြီး ဖတ်နေတာ။ ကားပါမစ်ကို တော့ သိပ်မယုံချင်ဘူး။ အခွန်လျှော့တာနဲ့ MPT ကိုတော့ ယုံသလိုလိုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ အစားအစာ ချက်ပြုတ်နည်းကို ရောက်တော့ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ပြီ။ သုံးပုံတစ်ပုံလောက် ယုံပြီးမှ April Fools' post မှန်း သိလိုက်တာ။
ဟယ်... ဒီတစ်ခါ နာမထုံတော့ဘူး....။
ဧပရယ်ဖူးလ်နေ့အတွက် ရေးမှန်း ခေါင်းစဉ်မြင်ကထဲက တိဒယ်...။
I did it again. I am so stupid! Ko ZT is LUZO.
အပေါ်ဆုံးက ပို့စ်တင်တဲ့ဒိတ်ကို မကြည့်ဖြစ်ဘဲ ..... ဖတ်နေရင်း တစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ သတင်းတွေဘာတွေတောင် တင်နေပြီလို့ စိတ်ထဲတောင် ထင်မိသေးတယ် .....
ပြီးတော့မှ ခံလိုက်ရမှန်းသိတော့တယ် ....
နောက်တခါ ကိုZT သတင်းတွေရေးရင် မယုံတော့ဘူး ......
ဆိုးချက်တော့ ကမ်းကုန်ပဲဗျာ။ ညတုန်းက ဖတ်ရင်းနဲ့ ကားတွေဝယ်ဖို့ အပြေးအလွှားစဉ်းစားလာတာ ပို့စ်ဆုံးမှာ ဟင်း ဟင်း ဟင်း။
ဒါတွေလည်း ဖြစ်သင့်တာ ကြာပေါ့
ချစ်ကိုကို လူဆိုးကြီးကြီးကြီး းးးး
ဒါအရူလုပ်ရမဲ့ကိတ်စမှုတ်ဘူးလေး မျက်စိပိတ် နားပိတ်နေတဲ့လူတွေကိူ သာသာတိုးတိုးပြောရမဲ့ဟာကို ဟွန်းးးးးး
တုံးတယ်ပြောလဲ ခံရရုံပဲရှိတော့တယ်... တကယ်ဝမ်းသာသွားတာ... နောက်ဆုံးကျမှ.... ဟိုးအမြင့်ကြီးထိမြှောက်ပြီးမှရိုက်ချခံရတဲ့လူလို... အောင့်သက်သက်နဲ့... အဟင့်...
အခွန်လျှော့တာ ဖတ်ပြီး ဝမ်းနည်းသွားတာ အရင်အပတ်ကမှ နိုင်ငံတော်ကို တာဝန်ကျေခဲ့လေပြီ ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့လို့။
ဖူးလုပ်နေတာလားမသိဘူး လို ့ဖတ်ရင်းနဲ ့တော့တွေးနေတာပဲ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က အမြဲတမ်းအခွင်ဆောင်နေရတော့ တကယ်ကြီးများလားဆိုပြီး အားရတက်ကြွဖတ်လာလိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့လဲ ဖူးခံလိုက်ရတာပါပဲ...။
I wish your NEWS will come true.
fuck it! I could save my time for i skipped to end at the start of the post.
ကလောက်ကတော့ ဧပရယ်ဖူးမွေးတဲ့လူက ရိုးနေပြီ... ဟင်းဟင်း
အမောင် ZT မဒမ်ကော နေကောင်းပါစ??